Iskuulka - Jiangsu Senwei Elektaroonigga Co., Ltd.
Nidaamka Maareynta Awooda Awoodda Sirdoonka ee Jaamacadda
nidaamka kambuyuutarka hal kaar & lacag is-adeegsi
Nidaamka maareynta awoodda ee caqli gal ah waxaa ka mid ah mitirka mitirka korantada, xog aruuriyaha iyo softiweerka nidaamka kumbuyuutarka ee PC. Aaladda mitirka korantada waa mitirka tamarta caadiga ah ama mitirka tamarta ee mobilada leh oo leh RS485 interface ah. Aaladda aruurinta macluumaadka ayaa mas'uul ka ah aruurinta xogta mitirka korantada. Aalad kasta oo aruurinta waxay qaadi kartaa 128 mitir oo koronto ah. Aaladda aruurinta xogtu waxay leedahay RS485, TCP / IP shabakadaha caadiga ah ee shabakadda. Nidaamka kumbuyuutar ee PC waxaa loo isticmaalaa in lagu aruuriyo xogta iyo falanqaynta tirakoobka ee xogta.
Waxaa jira habab badan oo mitirrada mitirka korantada: mitirrada tamarta caadiga ah ee leh RS485 interface, oo leh cabbir khariidad dareeraha dareeraha ah, mitiryo caqli-gal ah oo laba-wareeg ah, iyo afar-wareeg caqli-gal oo caqli-gal ah. Mitirka tamarta korantada ee caadiga ah ee leh cabbirka muraayadda korantada dareeraha ah ayaa soo bandhigi kara wadarta isticmaalka quwadda, awoodda la isticmaalay iyo awoodda hartay, inta badan loo isticmaalo rakibidda qaybinta; Mitirka modular waxaa badanaa loo adeegsadaa qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka ballaaran oo heer sare ah, oo laga tegay golaha mitirka asal ahaan dhexe ee cillad-darrada qaab-dhismeedka gudaha ee adag, dhibco badan oo fashil ah iyo dayactir adag.
Mitirka wuxuu la imanayaa Siiriya, kaas oo si madaxbanaan u fuliya dhammaan howlaha maaraynta awooda. Waa sahlan tahay in la rakibo oo si fudud loo dayactiro. Waa jiil cusub oo ka mid ah qalabka maaraynta awooda guryaha ee ardayda kaas oo badalaya golaha dhexe ee kontoroolka dhexe.
Marka lagu daro gaarista howlaheeda maaraynta iyo xakamaynta, nidaamka xakamaynta korantada ee caqliga leh ayaa sidoo kale lagu xiriirin karaa nidaamka kaararka kambuyuutarka iyada oo loo marayo interface si loo xaqiijiyo bixinta iskaa wax u qabso ee ardayda, kormeerka waqtiga-dhabta ah ee xarunta kaarka, si loo gaaro aan la ilaalin. iyo hawlgal aamin ah oo xasilan oo nidaamka xakamaynta elektaroonigga ah. Barnaamijkan ayaa inta badan loogu talagalay aruurinta xarun dhexe iyo adeegsiga mitirka korantada ee dugsiyada iyo shirkadaha. Qaabka isgaarsiinta RS485 waxaa loo isticmaalaa gudaha dhismaha, TCP / IP waxaa loo isticmaalaa kanaalka isgaarsiinta fog ee udhaxeysa dhismayaasha.
(1) Dejinta isticmaalaha iyo maareynta qalabka
——Roomaam dhisme (lambarka qolka iyo macluumaadka goobta sida sagxadda iyo dhismaha, tirada degganeyaasha iyo macluumaadka aqoonsiga ee la midka ah, kirada iyo macluumaadka gaarka ah)
——Meesha mitirka (isbarbardhiga u dhexeeya tirada mitirka hadda jira iyo tirada qolka, iyo macluumaadka isticmaala)
——Dataarada albaabka laga galo (lambarka albaabka la dhigo iyo macluumaadka qolka iyo mitirka ee hoos yimaada awooddiisa, meesha laga galo iyo magaca, iwm.)
(2) Mitirka korantada iyo maaraynta lacagta
—— Isticmaal guntin cabbiraad la soo dhoofiyey (saxsanaanta cabirka (1.0 heerka), oo soo saar cabirrada kala duwan ee isticmaalka isla waqti isku mid ah)
—— — Koronto oo dib loobixiyay, xiritaan lacag la'aan ah (dib udhaca xusuusta maqnaashaha korantada, xadka lacag-dhaafka ah waxaa lagu goyn karaa kombiyuutarka)
——Xusuusin otomaatig ah (SMS moobiil, xusuusin LED ah, weydiin jaamacadda WEB)
——— Xirfadaha xisaabta, daabacaadda biilka (rasiidhada dhigaalka markii la dhigayo)
———— Warbixinta kormeerka dejinta (akoonka dhigaalka iyo isu-dheelitirka, faahfaahinta deebaajiga
--Self-adeeg bixinta (si loo gaaro xiriir aan xuduud lahayn nidaamka hal-kaarka lacag bixinta is-adeeg iyo iibsiga korontada)
(3) Qaabeynta Xadeynta iyo Maareynta Load
——Shakhtarka ayaa ku fulin kara jaangooyooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin korantada / xakamaynta korantada, xaddidaadda rarka, iwm. Oo ay u geyso una keydin karto mitirka mitirka. Howlaha banaanka ka socda, mitirku wuxuu si otomaatig ah u gudan karaa howlo maareyn oo kala duwan oo uu dejiyay softiweerka
——Samee awooda korantada iyo waqtiga daminta waqti kasta
——Qaabka xadka culeyska ayaa loo dejin karaa si aan kala sooc lahayn, oo si otomaatig ah ayuu u bakhtiyaa markii xadka la dhaafo
——— Awooda culus ee culus ayaa loo dejin karaa si aan sabab lahayn, looga hortagaa dabka
——Xasuuso isticmaalka sharci darrada ah ee saldhigyada korantada xakamaynta xaddidan iyadoo la adeegsanayo qaab farsamo oo meesha looga saaro khataraha nabadgeliyada ee imaan kara
——Max soo celinta tooska ah kadib markii korontadu xumaato, waqtiga soo kabashada waxaa loo dejin karaa 0-255 daqiiqo, 0 micnaheedu waa majiro bogsasho
(4) La socodka xaalada iyo maareynta xogta
——Ka kormeer xaalad xaalad la xakameeyay (kormeerka-waqtiga-dhabta ah ee heerka tooska ah iyo heerka khaladka mitirka, heerka khadka tooska ah iyo heerka cilad, iwm.)
——Maaliyad iyo diiwaanno (kormeer-waqtiga-dhabta ah ee xaaladda is-beddelka, awoodda dhakhsaha ah, iwm ee kormeer wax ku ool ah)
——Ciidinta awooda iyo isticmaalka awooda (oo ka socota bandhiga iyo shabakada WEB weydiinta)
——Qaar koronto oo aasaasi ah (hadii ay dhaafto, qiimaha halbeega ayaa la dallaci doonaa)
——Beebka lacagta soo celinta (ardayda waxaa loo soo celin doonaa oo la degi doonaa waqtiga bedelka ama qalin jabinta, oo warbixin ayaa si otomaatig ah loo sameyn doonaa)
——Qaar isweydaarsiga bedelka xogta (tusaale ahaan, qolka isdhaafsiga, xog isweydaarsiga iyada oo loo marayo barnaamijyada software)
——Faarista taariikhiga ah ee diiwaanada taariikhiga ah (bil kasta, saddex-biloodle, iyo falanqaynta tirakoobka ee isticmaalka korantada, xadgudubyada, iwm.)
——Qiimooyin kacsan ayaa la dejin karaa (kharashyo kala duwan ayaa lagu dejiyaa iyada oo loo eegayo aqoonsiyada kala duwan ee isticmaaleyaasha qolka)
(5) Maamulka Nidaamka iyo Amniga Xogta
——Qaar guuldarro xakameyn deg deg ah (kontaroolka kumbuyuutarka si aad u muujiso astaamo gaar ah)
——— Jawaabta saxda ah ee baaritaanka qalalaasaha (kontaroolka kumbuyuutarka si aad u muujisid astaamo gaar ah)
Iyada oo la adeegsanayo shaqada xatooyada
——— kormeer waqti-dhiman ah
——Baarke dhismayaasha B / S (waa la maamuli karaa, la maamuli karaa, la weydiin karaa, iwm.) Iyadoo la adeegsanayo internetka.
——Xa xiriir aan walwal lahayn oo leh nidaamka kaararka ah (xaqiijinta lacag bixinta iyo bixinta, iibsiga awooda is-adeegga)
——Dad difaacyada inta lagu gudajiro awooda korantada (hadii ay dhacdo koronto ama koronto kombiyuutar, mitirka iyo aruuriyaha ayaa si otomaatig ah u keydiya xogta si loo hubiyo inaysan waayi doonin 10 sano)
——Xaadi xogta soo celinta (la jaan qaada habab kale oo gurmad ah iyo habab lagu hubinayo amniga xogta)
——Octer, password password, kala sooca awooda (aqoonsiyo kaladuwan ayaa leh maamulo kaladuwan, passwords kala duwan, aamin iyo qarsoodi, iyo maamul nidaamsan)
(1) Cabbiraadda tamarta firfircoon iyo falcelinta.
(2) Qeybaha ugu waaweyn waxay qaataan waxyaabo tayo sare leh oo tayo sare leh.
(3) Muuqaalka LCD oo leh xagal ballaadhan iyo isbarbardhiga sare ayaa muujin kara: awoodda hartay, wadarta guud ee isticmaalka, awoodda la iibsaday. waxay ku habboon tahay ardayda inay fiiriyaan isticmaalka korantada
(4) Iyadoo lagu cabiro shaqooyinka cabbiridda korantada, hadda, awoodda, qodobka korantada iyo wixii la mid ah.
(5) Mitirka laftiisa wuxuu leeyahay shaqo keydin xog. Markaad la xiriirayso kumbuyuutarka maareynta, isla markaaba waxay xajisaa xogta aruurinta tamarta; waxay taageertaa borotokoolka isgaarsiinta RS-485.
(6) Iyadoo leh jadwalka taariikhda iyo saacadda, 8 saacadood gudahood, waxaad ku dhexbeysan kartaa 8 waqti oo lagu xakameeyo korantada
(7) Mitirka korantada wuxuu u shaqeyn karaa si madaxbanaan wuxuuna leeyahay aqoonsi shaqeynaya culeys xaasidnimo wuxuuna bixiyaa dammaanad la isku halleyn karo oo looga hortago khataraha amniga ee imaan kara.
(8) Qaado rakibaadda DIN Rail, mid yar oo sahlan oo la rakibo.
Tixraaca tixraaca 220V
Sharaxaadda hada 5(20),1040)A
Heerka saxda ah Heerka firfircoon 1
Awoodda isticmaalka Khadka qiyaasta: <= 1.5W, 10VA; Safka hadda: <2VA
Xaraarada heerkulka -25 ~ 60degree
Mitirka Constant (imp / kWh) 3200
Baaxadda qoyaan ≤85%
Mitirka Tamarta elektaroonigga ah
Qaababka Isku Xirka Wire